कोमोडो राष्ट्रिय निकुञ्ज | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | इन्डोनेशिया, टापुहरू
हाम्रो ग्रहको लामो र विविध इतिहास छ र हामी विश्वास गर्छौं कि हामी सृष्टिको शीर्ष हुनुहुन्छ, सत्य यो हो कि कुनै समय हामी यस संसारको अनुहारमा पनि अवस्थित छैनौं। त्यस समयमा अन्य जनावरहरूले शासन गरे, तथाकथित "ड्र्यागनहरू" जस्ता पशुहरू कोमोडो नेश्नल पार्क.
निश्चित रूपमा तपाईंले उनीहरूलाई एक वृत्तचित्रमा देख्नुभयो किनकि तिनीहरू धेरै प्रसिद्ध छन्। तिनीहरू मा अवस्थित यस पार्कमा सुरक्षित छन् इन्डोनेशिया, सरकार द्वारा सुरक्षित र पर्यटन को लागी खुला छ। हेरौं यसले हामीलाई के प्रदान गर्दछ।
इन्डोनेशियामा छ, एक दक्षिण पूर्व एशियाई राज्य भारत र प्रशान्त महासागर बीचमा अवस्थित। यो एक टापु देश हो जुन विभिन्न आकारका १ is हजार भन्दा बढी टापुहरू द्वारा बनेको छ र करिब २ 13 करोड people० लाख मानिसहरू बसोबास गर्छन्। धेरै! वास्तवमा, यो विश्वमा चौथो सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश हो र मुस्लिम देशहरूमा यो पहिलो हो।
त्यसकारण, सुन्डा टापुहरूमा तपाईंले पार्क पाउनुहुनेछ। यी टापुहरू अष्ट्रेलियाको उत्तरमा छन् र दोस्रोमा पार्कको साथ ग्रेट र लो मा विभाजित छन्। यीमध्ये केही टापुहरू ज्वालामुखी चापको अंश हुन् जब जाडा सागर मुनि सुन्डा प्लेट डुबायो। समूह भित्र, उदाहरणका लागि, बाली, तिमोर वा तनिम्बरबार टापुहरू।
यी टापुहरूमा भएका धेरै ज्वालामुखीहरू अझै सक्रिय छन्, तर त्यहाँ अन्य पनि छन् जुन पहिले नै लोप भइसकेका छन्। सत्य यो हो कि औपनिवेशिक समयदेखि शानदार र दीर्घ-कालिक भूविज्ञान यी टापुहरु को अध्ययन को उद्देश्य भएको छ र त्यहाँ अझै आफ्नो गठन र प्रगति को बारे मा धेरै सिद्धान्तहरु छन्। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, सुन्दा बजास टापुहरू निकै जटिल र अझै पनि छन्, आज पनि भौगोलिक रूपमा सक्रिय छ।
औपनिवेशिक समयमा यी टापुहरूमध्ये धेरैजसो खेतजग्गामा परिणत भइसकेका थिए र मूल धनी वनस्पतिहरू चामल वा कपास र मानव जनसंख्याको लागि मार्ग बनाउन खाली गरियो। भाग्यवस, कोमोडो जस्ता टापुहरू सुरक्षित गरिएको छ र यसरी आज अवस्थित छ कोमोडो राष्ट्रिय निकुञ्ज जसमा कोमोडो, पडार र रिन्का टापुहरू सामेल छन् र अर्को २ smaller सानो आकारको।
पार्क एक छ १,1.733 वर्ग किलोमिटरको कुल क्षेत्र र १ 1980 in० मा स्थापना भएको थियो ठ्याक्कै सुरक्षा गर्न कोमोडो ड्र्यागन, संसारमा सब भन्दा ठूलो छेपारो। स्पष्टतः आज अन्य प्रजातिहरू समुद्री जस्ता पनि सुरक्षित छन्। १ 1991 XNUMX १ देखि यो एक विश्व विरासत साइट हो।
कोमोडो ड्र्यागन इन्डोनेसियाको छेपारोको ठुलो प्रजाति हो जुन यस क्षेत्रका धेरै टापुहरूमा बसोबास गर्दछ। यो पनि भनिन्छ कोमोडो मनिटर र यो आज संसारमा सबैभन्दा ठूलो छेपारो प्रजाति हो अधिकतम लम्बाई तीन मीटर र kil० किलो।
यसको आकारले विभिन्न सिद्धान्तहरू उत्पन्न गरेको छ। यो केही समयको लागि सोचियो कि तिनीहरू यति ठूला भए किनकि त्यहाँ कुनै मांसाहारी जनावरहरू छैनन् जो उनीहरूको लागि खतरा हो, यद्यपि अब यस्तो प्रवृत्ति लाग्छ कि तिनीहरू केवल विशाल छिपकलीको धेरै पुरानो जनसंख्याका बाँचेकाहरू हुन् जुन एक समय इन्डोनेसियामा बस्थे। र अष्ट्रेलिया। त्यो त्यो हो megafuna जो Pleistocene पछि मरे।
अस्ट्रेलियामा पत्ता लगाइएका केहि जीवाश्महरू million० लाख भन्दा बढी वर्षहरू यस सम्बन्धमा सिद्धान्तहरू गाईड गर्दछन्, त्यसैले यो एक सुस्थापित सिद्धान्त हो। जे होस् तिनीहरूको इतिहास वा तिनीहरूको उत्पत्ति, सत्य यो हो कि यो आकारको साथ तिनीहरू जgle्गाका राजाहरू हुन्, त्यसोभए कुरा गर्न। तिनीहरूले स्तनपायी, चराहरू, र invertebrates शिकार र खाने र एक छ मानिन्छ विषालु टोकाइ। यो विष तल्लो बaw्गामा भएको दुईवटा ग्रंथिबाट आउँदछ।
जे भए पनि उनीहरूको गोप्य हतियार, कोमोडो ड्रेगनहरूले समूहमा शिकार गर्दा ठूलो भएको संकेत देखाउँछन्, केहि असामान्य र सरीसृपको बीचमा प्रहार गर्ने। यदि तिनीहरूले मानिसहरूलाई खाने? त्यहाँ एउटा आक्रमण भएको छ, हो, २०१ 2017 मा एक पर्यटक मा अन्तिम, तर यो नियम छैन किनभने तिनीहरू प्राय: मानव उपस्थितिबाट भाग्छन्.
यहाँ पार्कमा तिनीहरू चुपचाप बस्छन्, तिनीहरू शिकार गर्छन्, उनीहरू पुन उत्पादन गर्दछन्। अण्डाहरू मे र अगस्ट बीचमा राखिन्छ र सेप्टेम्बरमा ह्याच। प्रत्येक महिलाले करिब २० अण्डाहरू राख्न सक्दछन् र ती months देखि months महिनासम्म हेच हुन्छन्। साना बच्चाहरूले उनीहरूको जन्म हुने बित्तिकै सावधान हुनुपर्दछ किनकि उनीहरू धेरै असुरक्षित छन् र उनीहरूलाई आक्रमण गर्न र वयस्क पुरुषहरूले खान सक्छन्। उनीहरूलाई परिपक्व हुन आठ देखि नौ बर्ष लाग्छ र उनीहरू 30० बर्ष भन्दा बढी बाँच्दैनन्.
कोमोडो राष्ट्रिय निकुञ्ज ज्वालामुखी टापुहरू मिलेर बनेको छ, गाह्रो इलाका र पहाडहरू छन् जुन एक हजार मिटर उचाइमा पुग्न सक्दैन। त्यहाँ समुद्री तटहरू र ro०० मिटर भन्दा बढी क्षेत्रमा केही वर्षा वनहरू छन्, तर सामान्यतया यो एक हो सुख्खा मौसम क्षेत्र बाँकी इन्डोनेशियाको तुलनामा र गर्मीमा यो एकदम तातो छ।
सबै महान ड्रैगनका लागि बास गर्न। ड्रेगनहरू बाहेक, पार्कले व्हेल शार्क, स्टिंग्रेज, पिग्मी समुद्री घोडा, जोकर माछा, समुद्री भैंसा, केकडा, चरा, अधिक सरीसृपहरू र लगभग बाह्र प्रजातिका साँपहरूलाई बचाउँछ।
तपाईं पार्कमा कसरी पुग्नुहुन्छ? अधिकांश दर्शकहरू पार्कमा प्रवेश गर्छन् फ्लोरेसको पश्चिममा वा सुम्बावाको पूर्वमा बर्माको शहरहरू बाट। तपाईं पनि छोड्न सक्नुहुन्छ बाली बाट। निकटतम एयरपोर्ट कोबुडो एयरपोर्ट आफै लाबुआन बाजो शहरमा छ। यो माउमेरे, फ्लोरेसको माउमर एयरपोर्टको नजिक पनि छ। बाली बाट वा जकार्ताबाट तपाईं यी शहरहरूमा हवाईजहाजबाट पुग्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूबाट डु by्गाबाट कोमोडो जान सक्नुहुन्छ। NAM एयर, गरुड इन्डोनेशिया वा वि W्ग एयरले तपाईंलाई लिन्छ।
बालीबाट तपाईं त्यहाँ बस जान सक्नुहुनेछ र फेरीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। फेरी क्रसिंग अनिवार्य छ। यो Labuan Bajo बाट छुट्छ र यसले and देखि hours घण्टा सम्म लिन सक्दछ। कोमोडोमा त्यहाँ कुनै उचित पोर्ट प्रतिक्षा गरिएको छैन त्यसैले तपाईंले फेरीबाट पछाडि जानुपर्दछ र सिलबोटहरूमा जानुपर्दछ जुन तपाईंलाई तुरून्तै यस टापुमा छोड्दछ।
तपाईं लाबुआन बाजोको रिसोर्टमा बस्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट भ्रमण व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। शहर सानो छ तर ठाउंमा ठिकै विकल्पहरू छन् आवास, रेस्टुरेन्ट र डाइभ शपहरू जताततै। शयनकक्षमा एउटा ओछ्यानको लागि लगभग $ २० गणना गर्नुहोस्। यो क्षेत्र मा अन्य साइटहरु को रूप मा सस्ता छैन तर यसको लोकप्रियता को स्तर मूल्य वृद्धि भएको छ। तपाईं Ciao होटल, एल बाजो होटल, होस्टल Harmoni, ले पाइरेट बाजो होटल वा ड्र्यागन डाईव कोमोडो मा रहन सक्नुहुन्छ, उदाहरण को लागी।
पार्कको टापुमा त्यहाँ कुनै मोटर सवारी छैन त्यसैले सबै कुरा पैदलै गरिन्छ। टापु डाइभिंगको लागि धेरै लोकप्रिय छ त्यसैले यो गर्न उत्तम गतिविधिहरू मध्ये एक हो। वास्तवमा यो विश्वको सबैभन्दा राम्रो डाइभि dest गन्तव्यहरू मध्ये एक हो: क्रिस्टल सफा पानी, धेरै समुद्री प्रजातिहरू, कोरलहरू, गुफाहरू, चट्टान संरचनाहरू ...
र अन्तिम तर कम्तिमा होइन, यहाँ त्यहाँ पोष्टकार्डहरू छन् जुन तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न: पादर टापुको अविश्वसनीय दृश्य, महासागर, टापु र सेतो समुद्र तटहरूको संयोजन प्रदान गर्दछ जुन सुन्दर छ, र प्रसिद्ध छ गुलाबी तट क्रेशर कोरलहरू द्वारा गठन गरिएको।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » टापुहरू » कोमोडो नेश्नल पार्क